Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Painkillers (2) အနာသက်သာဆေးများ (၂)
Painkillers (2) အနာသက်သာဆေးများ (၂)
Prescription Pain Medicine ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာ ဝယ်ရတဲ့ အနာသက်သာဆေးများ
1. Celecoxib (Celebrex) = (COX-2 inhibitor) NSAID
Dose = 100 mg - 200 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၃့၇
ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါ အရိုးနာ၊ (ရူမက်တစ်) အဆစ်နာ၊ ရက်တိုနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = နှလုံးရောဂါ၊ အစာအိမ် သွေးယိုခြင်း၊ Heart attack နှလုံး (အတက်ခ်) ရခြင်း၊ Stroke (စထုပ်ခ်) ရခြင်း၊
2. Tramadol (Ultram) 50 mg ပေးရတယ်။ အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၃့၈ ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါ = အတော်အသင့်နာခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ ဝမ်းချုပ်၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ အိပ်ချင်၊ အန်၊
3. Meperidine HCl (Demerol)
Dose = 50 mg - 100 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၄
4. Hydrocodone and Acetaminophen (Lorcet)
Dose = 5-500 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၅
5. Hydrocodone and Acetaminophen (Vicodin)
6. Hydrocodone and Acetaminophen (Lorcet Plus)
Dose = 7.5-650 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၅့၅
7. Hydrocodone and Acetaminophen (Vicodin ES)
Dose = 7.5-750 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၆
8. Hydrocodone-APAP and Acetaminophen (Norco)
Dose = 5-325 mg
Dose = 7.5-325 mg
Dose = 10-325 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၆့၅
9. Hydrocodone and Acetaminophen (Lortab)
Dose = 10-500 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၇
10. Hydrocodone and Acetaminophen (Vicodin HP)
Dose = 10-660 mg
11. Oxycodone HCl with Acetaminophen (Percocet)
Dose = 2.5-325 mg - 5- 325 mg - 7.5-325 mg - 7.5-500 mg - 0-325 mg - 10-650 mg
12. Oxycodone HCl, Oxycodone terephthalate and Aspirin (Percodan)
Dose = 4.50 mg
0.38 mg - 325 mg
13. Oxycodone HCl (Oxycontin 40)
Dose = 40 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၈့၅
14. Morphine sulfate (RMS, MS Contin)
Dose = 15 mg - 30 mg - 60 mg - 100 mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၉
15. Fentora (Duragesic, Fentanyl, Actiq) Skin patch
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၁ဝ
16. Hydromorphone hydrochloride = Dihydromorphinone (Dilaudid, Palladone)
Dose = 1 mg -2mg -3mg -4mg
အနာကိုသက်သာစေတဲ့ အဆင့် = ၁၁
17. Oxymorphone (Opana)
Dose =5mg - 10 mg
18. Extended release (Opana ER)
Dose =5mg - 7.5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg - 30 mg - 40 mg
3 -5- 8 hours (Injection and Suppository)
အမေရိကားမှာ ဆေးလွန်လို့ သေရတဲ့လူဦးရေဟာ Cocaine (ကိုကိန်း) နဲ့ Heroin (ဟီရိုယင်း) နှစ်မျိုးတွဲကြောင့် သေတာထက် အနာသက်သာဆေး တရားလွန် သုံးစွဲလို့က ပိုများတယ်။ နောက်ပိုင်း ၃-၄ ဆ အထိရှိလာတယ်။ သေအောင်သောက်ကြတဲ့ ဆေးတွေက Narcotic painkillers မူးယစ်ဆေးပါ အနာသက်သာဆေး OxyContin (Oxycodone), Opana (Oxymorphone HCl), Methadone, နဲ့ Vicodin (Hydrocodone) တွေဖြစ်တယ်။ မိုက်ကယ်-ဂျက်ဆင် ကွယ်လွန်ရတာဟာ သူ့ဆရာဝန်က Propofol ဆေးတွေ ထိုးပေးတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဆေးကတော့ အချိန်တို မေ့ဆေးဖြစ်တယ်။ Painkiller မဟုတ်ပါ။